ဘရိတ်နဲ့လီဗာကို တစ်ပြိုင်တည်းနင်းရင် ဘာဖြစ်မလဲ – Shwe Yaung Lan
HomeKnowledgeဘရိတ်နဲ့လီဗာကို တစ်ပြိုင်တည်းနင်းရင် ဘာဖြစ်မလဲ
ဘရိတ်နဲ့လီဗာကို တစ်ပြိုင်တည်းနင်းရင် ဘာဖြစ်မလဲ
ဘရိတ်နဲ့လီဗာကို တစ်ပြိုင်တည်းနင်းရင် ဘာဖြစ်မယ် ဘာတွေထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကားအမျိုးအစား မော်ဒယ် အရှိန် ဘရိတ်နဲ့လီဗာကိုနင်းတဲ့ဖိအား အကြိမ်ရေနဲ့ကြာချိန်ပေါ်မှာ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့ (Manual drive) မှာ ဘရိတ်နဲ့လီဗာကို ခြေဖျားနဲ့ခြေဖနောက်သုံး တွဲနင်းနိုင်သူကို ဆရာကြီး သဘာရင့်လို့ သပ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်ခြေက ကလပ်နင်းပြီး ညာခြေက ဘရိတ်နဲ့လီဗာမှာ ခြေဖျားခြေဖနောက် အဖိအဖေါ့နဲ့ ထိန်းနင်းတာပါ။
ကုန်းတက်တွေမှာ ရပ်ပြီးပြန်ထွက်ချိန် နောက်ပြန်မလိမ့်ရန်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခုချိန်ထိ အချို့သူတွေသုံးနေကြတုန်းထင်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကားလေးတွေမှာ (Auto Gear) အော်တိုဂီယာ ကွန်ပျူတာထိန်ချုပ်စနစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါ လီဗာနဲ့ဘရိတ်ကို တပြိုင်တည်းနင်းရင် အချို့ကားတွေမှာ သတိပေးမီးလင်းပါတယ်။ အချို့ကားတွေမှာတော့ ဘရိတ်နင်းထားရင် လီဗာအလုပ်မလုပ်တဲ့စနစ် ပါဝင်လာပါပြီ။
ယာဉ်မောင်းသင်ကြားမှုတွေမှာ “Never use your left foot to brake.” လို့သာ သင်ကြားပါတယ်။ သို့သော် သင်ကြားရာမှာ စနစ်မကျလို့သော်လည်းကောင်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အချို့သူတွေဟာ ဘရိတ်ကို ဘယ်ခြေ လီဗာကို ညာခြေ အသုံးပြုပြီးမောင်းကြတာရှိပါတယ်။
အချို့ကလည်း ကုန်းတက်မှာ နောက်မလိမ့်အောင် ဘယ်ခြေက ဘရိတ်ကိုနင်းပြီး ညာခြေက လီဗာနင်းကြတာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမောင်းတာဟာ လီဗာနဲ့ဘရိတ်ကို တပြိုင်တည်းနင်းမိနေတာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဘရိတ်ကို ဘယ်ခြေနဲ့အသုံးပြုတာကြောင့် ညာခြေလို ထောင့်မှန်မကျ ဖိအားအပြည့်မပေးနိုင်ဘဲ ဘရိတ်မိတာ ရှည်ပါတယ်။ ဒါဟာရုတ်တရက် လုံးဝရပ်တန့်ရမယ့်အခါမျိုးမှာ အန္တရာယ်ပါပဲ။ ဘရိတ်ကို ဘယ်ခြေနဲ့အသုံးပြုသူအများစုဟာ ဘယ်ခြေကို ဘရိတ်ပေါ်တင်ထားတာကြောင့် ဘရိတ်ပွန်းစားမှုများပါတယ်။ ဆီစားများပါတယ်။ မောင်းနှင်စနစ်ရဲ့သက်တမ်း တိုစေပါတယ်။ ဘရိတ်မီး တောက်လျောက်လင်းနေတာကြောင့် နောက်ကပါလာတဲ့ယာဉ်ကို ဇဝေဇဝါဖြစ်စေပါတယ်။
အချို့ကလည်း ဆင်ခြေတက်ပါလိမ့်မယ် “ပြိုင်ကားမောင်းသူအချို့က ဘယ်ခြေနဲ့ ဘရိတ်နင်းတယ်”။ သင်က ပြိုင်ကားမောင်းသူလား? သင့်ကားက ပြိုင်ကားလား? စပွန်ဆာရထားသလား? ကားပြိုင်ကွင်းထဲ မောင်းမှာလား?
အားလုံးခြုံပြောရရင် ဘယ်ခြေနဲ့ဘရိတ်နင်းတာဟာ လီဗာနဲ့ဘရိတ်ကို တပြိုင်တည်းနင်းမိနေတာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဘရိတ်တွေပိုပူမယ် ဘရိတ်ဆီဆူလာပြီး ဘရိတ်မမိဖြစ်မယ်။
အင်ဂျင် mount တွေအပျက်မြန်မယ်။
Torque converter ပျက်တတ်တယ်။
ဂီယာဆီ overheat ဖြစ်ပြီး ဂီယာသက်တမ်းတိုစေပါမယ်။
ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က လမ်းခွဲများ